သင့်ကလေးရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က အစားထိုးအသည်းသစ်ကို လက်မခံရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ - Hello Sayarwon
သင့်ကလေးရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က အစားထိုးအသည်းသစ်ကို လက်မခံရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ
ကိုယ်အင်္ဂါ အစားထိုးမှုကို ငြင်းဆန်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
ကိုယ်အင်္ဂါ အစားထိုးမှုကို ငြင်းဆန်ခြင်းဟာ အစားထိုးခံထားရတဲ့ လူနာရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က အစားထိုးထားတဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါတစ်ခုကို တုန့်ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်မှာ ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေဖြစ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ သွေးဖြူဥတွေ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကလေးငယ်ဟာ ရောဂါပိုးတွေနဲ့ ထိတွေ့မယ်ဆိုရင် ဒီသွေးဆဲလ်တွေဟာ ရောဂါပိုးဝင်ရောက်တဲ့နေရာကို ရောက်ရှိသွားပြီး ဝင်လာတဲ့ ရောဂါပိုးကို ဝန်းရံလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓါဟာ ရောဂါပိုးကို ဖျက်စီးပြီး အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ antibodies တွေကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။
အသည်းအသစ်ကို အစားထိုးလိုက်ချိန်မှာ ဒီသွေးဖြူဥတွေဟာ ဝင်လာတဲ့ ရောဂါပိုးကို ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုံမှန် တုန့်ပြန်မှု တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းကို လျော့နည်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ဖိနှိပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကို ကိုယ်ခံအားနည်းစေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ငြင်းဆန်ခြင်း မဖြစ်စေတဲ့ ဆေးတွေကို ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ခံအားစနစ် နည်းနေတာကြောင့် ကလေးငယ်ဟာ ရောဂါပိုး အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓါက အသည်းကို ငြင်းပယ်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ လုံလောက်အောင်သာ ကိုယ်ခံအားနည်းအောင် လုပ်သင့်ပြီး ရောဂါပိုးဝင်နှုန်းကို မြင့်မားစေလောက်အောင် လွန်ကဲစွာ ဖိနှိပ်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
၁။ ရုတ်တရက် ငြင်းပယ်ခြင်း
ဒီလို ငြင်းပယ်နှုန်းဟာ လူနာရဲ့ အသက်ပေါ်မူတည်ပြီး (အသက် ၂ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေမှာ ငြင်းပယ်နှုန်း နည်းပါတယ်) ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျဆင်းစေဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးပမာဏပေါ် မူတည်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ မွေးပြီး ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း (သို့) အစားထိုးပြီး လပေါင်းများစွာ အကြာမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အသည်းအစားထိုးခြင်းဟာ အခြားကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုးခြင်းနဲ့မတူပဲ ရုတ်တရက် ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ Graft survival အစားထိုးမှုအောင်မြင်နိုင်ချေအပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။ အသည်းဟာ ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အခါ ပွားနိုင်ပြီး အသည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အပြည့်ပြန်လည် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် ငြင်းပယ်မှုဟာ အဖြစ်များပြီး ပထမ ၅-၆ ပတ် အတွင်းမှာ အများဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ပြီးရင်တော့ ငြင်းပယ်နှုန်း နည်းပါးပေမယ့် ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ အချိန်တိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ သင်သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ လျှော့ခြင်း (သို့) ရပ်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ရင် ငြင်းပယ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ ရောဂါလက္ခဏာ မပြပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူနာတွေဟာ ထူးထူးခြားခြား ခံစားရခြင်း မရှိပါဘူး။ ပထမ လက္ခဏာကတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသည်းစစ်ဆေးမှုတွေ မြင့်တက်လာခြင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ အောက်ပါလက္ခဏာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အသားဝါခြင်း၊ မျက်လုံး၊ အရေပြား ဝါခြင်း
ငြင်းပယ်ခြင်းကို အသည်းအစားထိုးခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ကို မေ့ဆေးပေးထားစဉ် Ultrasound အကူအညီနဲ့ ဓါတ်မှန်ဆရာဝန်က ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ် ဆေးရုံဆင်းအပြီးမှာ အထက်ပါ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အစားထိုးထားတဲ့ ဆရာဝန်တွေကို ပြန်လည် ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ကြိမ် ဆေးရုံမှာ ပြန်ပြရချိန်အထိ မစောင့်သင့်ပါဘူး။ ရောဂါသိရှိပြီးရင်တော့ ကုသမှုဟာ ရိုးစင်းပြီး ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပထမ အကြိမ် ပေးရတဲ့ ဆေးတွေကတော့ corticosteroid ကို high dose ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငြင်းပယ်ခြင်းတွေရဲ့ ၉၀%ဟာ ဆေးပမာဏကို မြှင့်တင်လိုက်ရင် ထိရောက်စွာ ကုသနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ် ကိုယ်ခံအားနည်းစေတဲ့ ဆေးတွေကို မြှင့်တင်ခြင်း
အကြောတွင်းသွင်းရသော Steroid တွေကို သုံးရက် ထိုးခြင်း
ပိုပြင်းတဲ့ ကိုယ်ခံအားနည်းစေတဲ့ ဆေးတွေ (ATGAM သို့ OKT3) ကို အသုံးပြုခြင်း
ရုတ်တရက် ငြင်းပယ်သူ အများစုဟာ corticosteroid ကုသမှုကို တုန့်ပြန်ခြင်း မရှိကြပဲ အပိုကုသမှုတွေ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
၂။ ကြာရှည်စွာ ငြင်းပယ်ခြင်း
ကြာရှည်စွာ ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ အသည်းအစားထိုးထားတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ၂-၃% ( ရုတ်တရက် ငြင်းပယ်ခြင်း မကြာခဏ ဖြစ်သူ) တွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အသည်း အသားစယူခြင်းမှာ bile ducts တွေ ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ သွေးကြောငယ်တွေ ပျက်စီးခြင်းကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုံးကတော့ ကြာရှည်စွာ ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ ကုသရန်ခက်ခဲပြီး အစားထိုးမှု ကျရှုံးခြင်းကို ဖေါ်ပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေတဲ့ဆေးတွေ အမြောက်အမြားရှိတာမို့ ကြာရှည်စွာ ငြင်းပယ်ခြင်း ကိုလည်း ကုသနိုင်ပါတယ်။
Pediatric liver disease: Parent’s guide. https://www.starship.org.nz/media/209654/biliary_atresia_2013_final.pdf. Accessed 15/08/2015.